Kulan: Meel Furan Meel Furan oo Farriin Farriin | Laga soo bilaabo Linux
Sababtoo ah warar badan oo soo noqnoqday oo ku saabsan Dayacnaanta WhatsApp ee la yaqaan ama suuragalka ah, mid ka mid ah codsiyada ugu isticmaalka badan adduunka, shakhsiyaad iyo ururo, inbadan waxay u haajireen isbarbar dhig ama gebi ahaanba, muddo dheer kuwa kale ee lagula taliyay sida telegraam y signal.
En Laga soo bilaabo Linux, badanaa kama hadalno WhatsApp, tan iyo Ma aha Software Bilaash ama Furan. Waxaan guud ahaan tan u sameynaa si aan u tixraacno kanaga dayacanka ama isbarbardhiga kuwa kale, gaar ahaan xalalka bilaashka ah iyo kuwa furan. Sida hadda, waxaan ka hadli doonaa Kalfadhiga, kaas oo loo dalacsiiyay a il furan barnaamij fariin aamin ah.
Aniga shaqsiyan waan joojiyay isticmaalka WhatsApp Guud ahaan laga bilaabo bishaan Febraayo 2020, maadaama aanan si dhib ah u isticmaalin, iyadoo taasi jirto, waxay baabi'isay xog badan iyo meel disk ah, iyo waxyaabo kale oo xun. Waxaan si xoogan u isticmaalayay 3 sano telegraam oo hadda gabi ahaanba sida madal isgaarsiinta iyo / ama codsiga fariinta moobaylka iyo desktop-ka.
1 Yaree ama iska ilaali isticmaalka WhatsApp
2.1 Maxay tahay?
2.2 Astaamaha ugu muhiimsan
2.3 Ku rakibida GNU / Linux
Yaree ama iska ilaali isticmaalka WhatsApp
Laakiin, sababahaas ka baxsan, walaac amni dhab ah ama sababo, oo ay ka turjumayaan shakhsiyaad ama ururro caalami ah, waa in lagu xisaabtamo. Tusaale ahaan, ku saabsan WhatsApp, warar lagu kalsoonaan karo ayaa ka soo baxay ururada sida:
"Komishanka yurub ayaa weydiisatay shaqaalaheeda inay bilaabaan adeegsiga Signal, oo ah codsi fariin ugudambeyn ah oo la iskudayay, iskuday si loo kordhiyo amniga isgaarsiintooda. Tilmaamuhu wuxuu ka muuqday looxyada fariimaha gudaha horraantii Febraayo, isagoo ogeysiinaya shaqaalaha in "Signal loo xushay inuu yahay barnaamijka lagu taliyay ee farriinta deg dega ah ee dadweynaha." Abka waxaa doorbiday dadka u ololeeya arrimaha asturnaanta sababtuna tahay sirta dhammaadka-dhamaadka iyo tikniyoolajiyadda il furan.". Warbaahinta Siyaasadda - 23/02/2020
"Ururka Qaramada Midoobay waxay ku amreen saraakiishooda inaysan adeegsan WhatsApp si ay ula xiriiraan. Markii la weydiiyay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres inuu la xiriiray Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya ama hogaamiye kale oo adduunka ah iyadoo la adeegsanayo WhatsApp, Afhayeenka Qaramada Midoobay Farhan Haq ayaa sheegay Khamiistii: Saraakiisha sarsare ee Qaramada Midoobay inay leeyihiin heshay tilmaamo ah in aan la isticmaalin WhatsApp, looma taageerayo inay tahay farsamo aamin ah". Dhexdhexaadinta Reuters - 23/01/2020
Iyo sababo badan, macluumaad, sababo ama warar sida aad tahay, hadda waa cusub Codsi fariin wuxuu dhex maraa dadweynaha, gaar ahaan kuwa jecel Software bilaash ah iyo ilo furan, wicitaan Kalfadhiga.
Sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda degel rasmi ah, gaar ahaan in ay "Warqad Cad" (Wargeysyada Cad):
"Kalfadhiga waa il furan, codsi fariin aamin ah oo furaha guud salka ku haya oo adeegsada tiro ka mid ah server-yada kaydinta baahinta iyo borotokoolka hagida basasha si loogu diro farriimo dhammaad-ilaa-dhammaad qarsoodi ah oo leh ugu yaraan soo-helidda metadata isticmaale. Waxay sidaas sameysaa iyadoo la siinayo astaamaha guud ee barnaamijyada fariimaha ugu waaweyn".
Intaas waxaa sii dheer, waa codsi ay abuureen Shirkadda Loki, hay'ad loo abuuray inay soo saarto badeecadaha softiweerka oo diiradda saaraya amniga iyo asturnaanta isticmaaleyaasheeda.
Waa horumar il furan.
Waa codsi iskudhaf ah (Windows, MacOS, Linux, Android iyo iOS).
Waxay aqbashaa dirista fariimaha codka iyo lifaaqyada qaabab badan.
Waxay adeegsaneysaa sirta dhammaadka-dhamaadka ee baabi'ineysa ururinta metadata xasaasiga ah.
Kuu ogolaanayaa sheekaysiga iyada oo loo marayo kooxo ilaa 10 qof ah ama kanaal xubin aan xadidnayn.
Ma diiwaan galiso metadata, maadaama aysan keydin, raadraacin ama duubin metadata ee farriimaha.
Waxaa si gaar ah loogu talagalay inay bixiso heer sare oo qarsoodi ah iyo xorriyad, iyadoo la wajahayo qaababka hadda ee kormeerka.
Waxay leedahay isku-dubbarid qalab badan, taas oo ah, waxay u isticmaashaa aqoonsi fadhiga taleefanka iyo kombuyuutarka isticmaaleha.
Waxay la shaqeysaa abuuritaanka koontooyin gebi ahaanba qarsoodi ah, sidaa darteed, looma baahna lambar taleefan ama emayl si loo abuuro aqoonsi kalfadhi.
Ku rakibida GNU / Linux
Ku saabsan annaga Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, Kalfadhiga waxay bixisaa feyl rakibid qaab ah AppImage qiyaastii 125 MB, oo hadda ka kooban version deggan 1.0.2. Sababta taas, rakibidu waxay noqon doontaa mid aad u fudud waxayna la jaan qaadi doontaa qaar badan oo ka mid ah qaybintayada hadda jira. Wixii Android, Kulan - Rasuul Gaar ah, ayaa laga heli karaa nooca 10.0.3, oo leh cabir ah 20 MB taasina waxay u baahan tahay nooc ka mid ah Android 5.0 ama ka sareeya.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Session», Codsi fariin aamin ah oo furan oo furan, oo leh astaamo lama huraan ah oo la mid ah codsiyada kale ee fariimaha caanka ah ee aadka loo jecel yahay, ayaa ah mid aad u daneyn iyo faa'iido leh, guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Kulan: Meel Furan Meel Furan oo Farriin Farriin ah
warbixin dalwaddii dijo
Maaddaama taleefannada casriga ah la ikhtiraacay ficil ahaan waa wax aan macquul ahayn in aan la raad raacin, oo hadda iyada oo la haysto Facebook (WhatsApp, Messenger, IG, iwm.) Waxaan soo saaraynaa xog weyn oo bahal ah.
Jawaab ku bixi warbixinta
Salaan, VirtualReport. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Gebi ahaanba waan ku raacsanahay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka tirsanaado kanaalkaan macluumaadka si aan ugu cusbooneysiiyo wararka tan iyo markii aan ka helo barnaamijka xiisaha leh….
Ku jawaab Raiber
Waxay umuuqataa mid xiiso leh, in kastoo wax aan marwalba doonayo inaan ogaado ay tahay sida arjiga loogu qoro GNU / Linux, maxaa yeelay markaas waxay kujiraan Electron (qaab dhismeedka softiweer) kumbuyuutarradii horena waxay qaadan jireen sanado inay bilaabaan. Waxay sidoo kale fiicnaan laheyd in la ogaado haddii xiriir joogto ah oo lala yeesho taleefanka gacantu uu lagama maarmaan u yahay sida Signal oo kale, taas oo aan macquul ahayn aragtidayda.
Kaliya waan xiiseynayay waxaanan isku dayi doonaa heh heh. Salaan.
Salaan, Baabel. Xaqiiqdii way fiicnaan laheyd in la ogaado taas, laakiin warqaddeeda cad ama qaybteeda Su'aalaha la Weydiiyo ma muujineyso in lagu sameeyay elektaroonig ama si cad oo muuqata. Marka laga hadlayo tan kale, waxaan u maleynayaa iyada oo la adeegsanayo isku-dubbarid qalab badan iyo iyadoo la adeegsanayo akoonno gebi ahaanba qarsoodi ah oo aan ku xirneyn lambarka taleefanka, maadaama uusan jirin xiriir joogto ah oo lala yeesho taleefanka gacanta. Laakiin waa inaad si fiican u tijaabisaa si aad u aragto sida ay u shaqeyso.
Miyaad aragtay rukhsadaha rakibidda ee laga codsaday Android? gebi ahaanba meesha laga saaray.
Protonmail-ka ayaa ka shaqeynaya barnaamij fariin ah, taas ayaa noqon doonta mida fiican 😉
Ku soo jawaab Linuxito
Yuusuf Marin dijo
Waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo
Jawaab Jose Marin
Microsoft waxay shaacisay helitaanka guud ee Azure Sphere
GIMP 2.10.18 waxay la timid kooxayn qalab, hagaajin iyo wax ka badan ah